पुराण भन्छः यी ४ प्रकारका युवतीसँग गर्नु हुँदैन विवाह ! – Sandesh Press
November 20, 2021 162
एजेन्सी : विवाह मानव जीवनको महत्वपूर्ण संस्कार मध्ये एक हो । सुखी विवाह जीवनमा सबैले चाहन्छन् । तर जीवन साथी राम्रो भए मात्र विवाह राम्रो हुन्छ । विवाहका लागि यस्तो पार्टनर छान्नु पर्छ जसले घर र परिवारमा प्रेम बाँड्न सकोस् ।
विष्णु पुराणमा स्त्रीहरुको विषयमा थुप्रै कुरा गरिएको छ । यो पुराणमा विवाहका लागि ४ प्रकारका युवती अयोग्य हुने समेत उल्लेख छ । कस्ता युवती हुन् त विवाह गर्न नहुने ?
खराव बोली भएकी/ कटु बचन बोल्ने:भनिन्छ मिठो बोलीमा सरस्वतीको बास हुन्छ । सरस्वतीलाई बाणीकी देवी समेत भनिन्छ । मिठो बोली बोल्ने स्त्रीसँग सरस्वती सँधै प्रसन्न हुने पुराणमा उल्लेख छ । कटु वचन बोल्ने स्त्रीको स्वभाव पनि बोली जस्तै हुन्छ । यस्ता स्त्रीले घरको शान्ति खल्बल्याउँछन् भन्ने पुराणमा उल्लेख छ । विवाह गर्दा कटु बचन बोल्ने युवतीबाट टाढै रहेको राम्रो ।
आमा वा बाबुको कोही नाता पर्ने:नाता पर्ने युवतीसँग विवाह गर्नु हुँदैन । सहगोत्रीसँग पनि विवाह गर्नु हुँदैन । विष्णु पुराणमा माता वा पिता कसैको पनि नाता पर्ने युवतीसँग विवाह गर्दा विभिन्न अनिष्ठ हुने उल्लेख छ । बैज्ञानिकहरुले समेत नजिकको सम्बन्धमा विवाह घातक हुने बताएका छन् । शास्त्रमा कम्तिमा सात पुस्ता भन्दा टाढा पुगेपछी मात्र विवाह गर्नु राम्रो मानिएको छ ।
पुर पुरुष/ दुष्ट पुरुषसँग सम्बन्ध भएकी स्त्री:विवाह अघि नै पुरुषसँग सम्बन्ध भएकी र दुष्ट पुरुषको संगत गर्ने स्त्रीलाई पनि विष्णु पुराणले विवाहका लागि अनुपयुक्त भनेको छ । यस्ता युवतीलाई विवाह गर्दा जीवनमा संकट आइलाग्न सक्छ । सके सम्म दुष्ट पुरुषसँग नजिक भएकी स्त्रीसँग विवाह नगर्नुस् ।
अल्छी/ ढिलो सम्म सुत्ने :अल्छी हुनु स्त्रीका लागि असोभनीय भन्छ विष्णु पुराण । यो पुराणका अनुसार अल्छी र विवाह ढिलो सम्म सुत्ने स्त्री आलसको प्रतिक हुन् । आलसी स्त्रीले घरुमा कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्न सक्दिन । फोहोर घरमा लक्ष्मीको बास हुँदैन । ढिलो सम्म सुत्ने मानिस स्वस्थ समेत हुँदैनन् । त्यसकारण अल्छी युवतीलाई पनि विवाह गर्नु हुँदैन ।
यसैगरी नारीको सुन्दरता अनुहारमा मात्र होइन उसको विभिन्न अङ्गमा समेत समेटिएको हुन्छ समुन्द्र शास्त्रमा ना इटो अर्थात नाभीको पनि निक्कै महत्व छ । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन र ब्यबहारबाट समेत थाहा नपाएको कुरा नाभीबाट थाहा हुन्छ ।समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीको नाभी लामो र अनियमित हुन्छ त्यस्ता स्त्रीमा आत्म विश्वास बढी हुन्छ ।
यस्ता स्त्रीहरु आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी हुन्छन् । यिनीहरुको चिनजान गर्ने र घुलमिल हुने स्वभाव हुन्छ । यसकै कारणले पुरुषहरुसँग उनीहरुको सम्बन्ध भने समय समयमा समस्यामा पदर्छ ।ज्योतिशास्त्रको एउटा शाखा समुन्द्र विज्ञानमा शरीरमा भएका चिन्हका आधारमा ब्यक्तिको भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ । शरीरमा पाइएका यस्ता निशानाहरु हाम्रो भविष्य र चरित्रका बारे धेरै कुरामा बताउँछन् । समुन्द्रशास्त्रमा सुकन्या अर्थात सुन्दर युवतीका बारेमा पनि उल्लेख छ ।
यस्ती कन्या एकदमै भाग्यशाली हुन्छन् । जसका भाग्यका आधारमा पति र परिवार सुखमय हुनुका साथै धनवान पनि हुन्छ समुन्द्रशास्त्र अनुसार कस्ता युवती कति भाग्यशाली भनेर येसरी पहिचान गरिएको छ जुन स्त्रीका आँखा मृगनयनी र सेतो भागको अन्तमा रातो लागेको हुन्छ, त्यस्ता युवती अत्यन्तै भाग्यशाली र सुखभोग गर्ने हुन्छन्।
जसको जि ब्रो रातो र कमलो हुन्छ । यस्ता युवती आफू सुखभोग गर्ने र परिवारलाई पनि सुख दिने खालका हुन्छन् जुन स्त्रीको ना इटो गहिरो र भित्रबाट उठेको हुँदैंन्, त्यस्ता युवतीहरुको जीवन सुखमय हुन्छ । :-नाकको अग्रभागमा कोठी हुने युवती धन भरिपूर्ण हुन्छन् । उनीहरु धनमान्य जीवन जीउछन् ।युवतीको पैतालामा कमलको चक्र र शंखको चिन्ह हुनुलाई एकदमै शुभ मानिन्छ । यस्ता युवतीका श्रीमान उच्च अधिकारी, ठूलाब्यापारी र बरिष्ठ राजनेता हुन्छन्, यी स्वयं पनि उच्च तहमा रहन्छन् । :– नाइ टोको तल कोठी हुने युवतीहरु भाग्यमानी र पूरा जीवन सुखका साथ बिताउने मानिन्छ ।
समुन्द्रशास्त्रकाअनुसार जुन युवतीहरुको बुढी औला उठेको हुन्छ वा गोलो अथवा रातो हुन्छ त्यस्ता युवतीहरु अत्यन्त भाग्यशालीहुन्छन् । यदि बुढी औला लामो भएमा जीवनमा धेरै कष्टको समान गर्नुपर्ने मानिन्छ । :-जुन युवतीको बुढी औंला सर्प आकारको हुन्छ त्यस्ता युवतीहरु धनी हुन्छन् ।पैतालामा त्रिकोणको चिन्ह भएका युवतीहरु चतुर हुन्छन् । यिनीहरु आफ्नो बुद्धि र समझदारीले परिवारलाई खुशीसाथ राख्छन्
Prev३० वर्षीया जागिरे कन्यालाई इमान्दार वर चाहियो–सम्पर्क नम्बर ९८५५०५७
Nextडाक्टरले मृ त घोषणा गरेर पोष्टमार्टम गर्न ठिक्क परेका युवक जब टेवलमा उठेर बसे (भिडियो हेर्नुस्)
यसरी लुकाउनुस् फेसबुक र इन्स्टाग्राममा आउने लाइक